बिदाई भएर जाँदा के भने कुलमानले ? (पूर्णपाठ) - Laganikhabar
बिदाई भएर जाँदा के भने कुलमानले ? (पूर्णपाठ)
मंगलबार, ३० भदौ २०७७, १७ : ०७ मा प्रकाशित
लगानी खबर, काठमाडौँ - कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट बिदा भएका छन् । उनकाे चार वर्षीय कार्यकाल सकिएकाे हुनाले उनलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट बिदाई गरिएको हाे ।
हेर्नुस् बिदा भएर जाँदा के भने कुलमानले ?
अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको क्षमता अभिबृद्धि भै करिव १५०० मेगावाट पुगेको छ । नेपाल–भारत दोश्रो अन्तदेशीय प्रसारण लाइन न्यू बुटवल–गोरखपुरको लागि लगानी ढाँचा (Implementation Modality) तयार भएको छ । साथै नेपाल चीनबीचको रातोमाटे रसुवागढी केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको लागि समझदरीपत्रमा हस्ताक्षर भै कार्य अगाडि बढेको छ । नेपालले भारत तथा बंगंलादेशको विद्युत् बजारमा पहँुच पाउने गरी कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
आगामी दिन प्राधिकरणका लागि थप चुनौतिपूर्ण रहनेछ । आहिलेसम्म प्राप्त उपलव्धीलाई संस्थागत गर्नु पहिलो चुनौती हो भने उत्पादित विद्युतको वजार व्यवस्थापन दोश्रो चुनौतीको रुपमा रहेको छ । विद्युत् आपूर्तिको नियमितता र गुणस्तर बृद्धि गर्नु तेश्रो चुनौती रहेको छ । संघीय संरचना र नयाँ विद्युत ऐन अनुसार संस्थागत पुनर्संरचना गरी प्रभावकारी संचालनमा ल्याउनू चौथोे चुनौती रहको छ । यी चार मुख्य चुनौतीबाहेक अन्य व्यवस्थापकीय चुनौतीहरु थपिँदै जानेछन् ।
प्राधिकरणमार्फत नेपालको उर्जा क्षेत्रमा वित्तिय सहयोग गर्नु हुने World Bank, ADB, EIB, EXIM Banks, KFW, JICA, NORAD, AIIB आदि विकास साझेदार निकायहरु तथा संचयकोष, नागरिक लगानी कोषलगायत स्वदेशी वित्तिय संस्थाहरुलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
मिति : २०७७ साल भदौ ३० गते, मंगलबार ।
नेप्सेमा लिवर्टी इनर्जीको आइपिओ सूचिकृत, कतिमा खुल्छ कारोबार ?
हाइड्रोमा लगानी गर्ने हो ? युनाईटेड इदी–मार्दीको आइपिओ बजारमा आउँदै !
लिवर्टी इनर्जीको आइपिओ शेयरधनीको डिम्याट खातामा
लगानीको अवसर : माउन्टेन इनर्जीको आइपिओ बजारमा आउँदै !